Esi mgbọrọgwụ LG G2 na gam akporo 4.4.2 ma wụnye TWRP | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Iweghachite gam akporo, Gam akporo Root, LG, Nkuzi
O teela oge m mere a zuru ezu na ọtụtụ nkuzi banyere otu esi wedata LG G2 na gam akporo 4.2.2. site n'ebe ahụ ka ị gbanye mgbọrọgwụ ma nwee ike ịwụnye mgbake gbanwere nke na-enye anyị ohere ịmepụta mbipụta ndabere anyị nke sistemụ niile, ma ọ bụ ọbụlagodi Flash gbanwere. Ọfọn, ọgbaghara a niile adịkwaghị mkpa inwe ike Mgbọrọgwụ LG G2 na gam akporo 4.4.2 ma wụnye ihe gbanwere. Anyị nwere ike ịnweta ihe a niile ugbu a na Kit Kat, Android 4.4.2, na enweghị nwere kọmputa nkeonwe, nke ọma, nke a abụghị eziokwu ebe ọ bụ na ibudata otu APKs dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị ga-eji kọmputa nkeonwe ebe ọ bụ na site na ihe nchọgharị weebụ maka gam akporo, ọ dịkarịa ala site na ndị m gbalịrị ya, enwebeghị m ike ibudata Towelrot ngwa nke bu nke gaghi akwado ya Dịrị LG G2.
Anyị ji ihe a nile n'aka ndị mmepe nke ogo GeoHot, Onye Mmepụta nke mgbọrọgwụ nke LG G2 na gam akporo 4.4.2 na onye n'oge ya bịara mara maka Jailbreak iPhone ma obu buru onye mbu mbanye anataghị ikike Play Station 3. N'akụkụ nke APK nke ga-etinye ihe mgbake gbanwere ozugbo TWRP, anyị kwesịrị ịkele Cloudyfa, mmata ochie nke ihe ngosi na mmepe Android maka LG, na Roms dị ka Cloud G3, nke doro anya bụ otu n'ime ROM kacha mma maka LG G2.
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo na nkụnye eji isi mee nke isiokwu a ma ọ bụ nkuzi, ihe a dị mfe dịka nbudata APK abụọ ahụ m na-egosi na vidiyo na buru ụzọ mee ngwa GeoHot, Towelroot ga-agbanye mgbọrọgwụ LG G2, Ọnọdụ dị mkpa maka APK nke abụọ akpọrọ Nchekwa onwe kedu ihe ọ ga-emere anyị wụnye ihe gbanwere agbanwe na LG G2 anyị, kpọmkwem na TWRP site na nke anyị nwere ike isi na-acha ọkụ ọkụ ROM, mepụta akwụkwọ ndabere nke usoro anyị niile, ma ọ bụ gbanwee mgbake maka nke kachasị amasị anyị.
Achọrọ m ịgwa gị ihe ọzọ ebe a na leta na-eso ndị nkuzi vidiyo banyere otu esi gbanye LG G2 na gam akporo 4.4.2 ma wụnye ihe gbanwereỌ bụ ezie na dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mfe ịnweta na gị na ị na-ahụ vidiyo agbakwunyere, ị ga-enwe ihe karịrị iji ghọta usoro ntinye nke ngwa abụọ ahụ, usoro nke otu ihe ahụ, yana nbudata dị mkpa nke superSU na mmelite nke otu ọnụọgụ abụọ.
O doro anya na ọganihu na otu n'ime ụzọ kachasị mfe m hụtụrụla iji nweta mgbọrọgwụ na mgbake na njedebe gam akporo. Ihe a niile nye nnukwu amamihe dịka GeoHot ma ọ bụ Cloudyfa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Esi mgbọrọgwụ LG G2 na gam akporo 4.4.2 ma wụnye ihe gbanwere
Ndewo Francisco. Mgbe m meghere Ozi m, enwere m oke ịnụ ọkụ n'obi, n'ihi na m gwara onwe m, sị: "Ah, m ga-emesị nwee LG G2, D806 (Argentina), na arụzigharị a gbanwere". M jisiri ike gbanye ya. Mana ọ bụ kpam kpam agaghị ekwe omume (ruo taa) ịchọta usoro iji wụnye ya na Agbanwe Agbanwe. M pụtara, m "ọkara ebe ahụ." Ngwaọrụ m na-agba ọsọ gam akporo 4.4.2 Kit Kat, nke m nwetara site na OTA, ya bụ, mmelite ọrụ. Etufuru m Mgbọrọgwụ gara aga, mana ekele CoperFix, onye nrụpụta pụrụ iche nke zitere m faịlụ abụọ site na Twitter, agbalịrị m weghachite mgbọrọgwụ ..., mana B NOTGH like dịka nke a, Iweghachite Ana m echetara gị na ọ bụ m, onye jụrụ gị ma D806 (Argentina), na D802 (Internac), B THE OTU ..., ma ị kpebiri ịchọpụta. Ọfọn, ọkwa nke taa edozighị nsogbu ahụ, ebe ọ bụ na nnukwu AuroRec, M KWERE m nwalee ya ..., mana ọ B NOTGH have ndakọrịta na D806. Achọrọ m ịgwa gị nke a ... ma kwuo ndewo. Ana m echere gị ka ị dozie nsogbu nke LG G2 D806 m. Nnukwu nnabata site na òtù ụmụnna America na Europe…!
Zaghachi José Orlando Sarmiento
ehihie ọma! Ọ ga-amasị m ịmara ma mgbọrọgwụ a ọ na-arụ ọrụ maka LG G2 MINI?
Morningtụtụ ọma, ndị mara mma si ANDROidsIS. Ọfọn, n'abalị ikpeazụ m na-arụ ọrụ na LG G2, D806 (Argentina). Ekwesịrị m ịgwa gị na, ọzọkwa, m dara, na mbọ m, ịwụnye Mgbanwe Agbanwe, nke ị na-enye ndụmọdụ. Mgbe m gara ibudata Auto-Rec, maka ụdị D806, achọpụtara m na ọ pụtaghị (ọ na-aga D805, nke a na-ere na Brazil; na Peru, e nwere D804). Agbalịrị m D802, ma ọ naghị arụ ọrụ ..., mgbe ahụ, m mere ule ahụ na D805 (ebe ọ bụ na ndị ọkachamara kwuru, ha yiri nke ahụ), ọ naghịkwa arụ ọrụ. Ejiri APK, mana mgbe ị "mepee", Ọ B itGH "" jụọ "gị, onye a ma ama kwere, ka SuperSu. Kpọmkwem, ọ na-agọnarị gị Ikike, na windo njehie na-egosi. Ijikọ ụwa niile, aga m aga n'ihu na LG G2, Root, mana enweghị mgbake gbanwetụrụ. Ọ nwere ike ịbụ na maka ụdị dị iche iche nke LG ama ama, ha agabeghị ụzọ iji wụnye mgbake na gam akporo 4.4.2? Ọfọn, Anaghị m enye gị nsogbu ọzọ ..., na m ga na-eche ruo mgbe m ruru aka gị, azịza, nke n'eziokwu m ejighị ya kpọrọ ihe, ha ga-ezitere m ya. Ozo, ekele diri oru gi ..., na ekele m nke oma, ndi nile ... !!!
Ndewo Enwere m lg g2 site na movistar ... Adị m ọhụrụ na nke a ma ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịmara ụfọdụ ihe ... n'ọdịnihu ekele ... Enwere m ike ịgbanye lg g2 m ma ọ bụrụ na anaghị ahapụ ya na movistar ? ... Ọ ga-amasị m ịtụgharị ya na lg g3 dịka m siri hụ na ị meela ... daalụ
Ndewo, agbasoro m usoro gị iji gbanye ekwentị m lg g2 mini ma gbanye mgbọrọgwụ mana mgbe m wụnye mgbake gbanwere m nyere ya reboot ọ gbanyụọ ọ naghị agbanye, ekwentị m anaghị arụ ọrụ, biko nyere aka
Emere m ekwentị m ugbu a ọ naghị agbanye !!! M jikọọ ya na chaja na ihe ọ bụla !! biko nyere aka
Lee, enwere m otu nsogbu ahụ. Ihe m mere bụ ijikọ ya na PC m, na ọnọdụ Downloader, wee pịa "Firmware Recovery", dị ka a ga-asị na arụnyere nwelite na-ezighi ezi. Ọ bụ LG PC PC ka ebudatara ya, onye ọ bụla rụrụ nnukwu ọrụ. Taa, m ga - agbanye mgbọrọgwụ na LG G2 D806, mana enweghị ebe m ga - ahụ Mgbanwe Agbanwe Agbanwe, dakọtara na ụdị LG G2 a. Ọ bụrụ na nke a baara gị uru, m ga-enwe afọ ojuju. Ekele…!
Achọrọ m ịgbakwunye Newry, na anaghị m etinye ROM esiri esi, mana 4.4.2, nke m nwetara, site na mmelite ọrụ, nke bụ naanị ụzọ LG Software ga-esi mata ngwaọrụ ahụ. Ya mere, enwere m ike inye gị azịza ahụ; nke anaghị eme, ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-agba ọsọ ROM, nke na-abụghị Ọchịchị. Naanị m chọrọ itinye ya na okwu m gara aga. Ekele…!
towelroot anaghị arụ ọrụ na lg g2 mini D625 m nwere ike inyere m aka inwe mgbọrọgwụ
Jiri D802_autorec.apk (kpachara anya! Ọ bụghị D802T)
Rịba ama na mgbe ịmechara ya, ịkụ aka ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ. Ma ugbu a na njikọ ha na-ekwu otu esi edozi ya
Richie gonzales dijo
Nkpọrọgwu mere ka ọ zuo oke ma gbanwetụrụ mgbake tinye ya na enweghị nsogbu…. ugbu a mgbe m na-apụ na mgbake mgbe mpụsịrị LG logo anaghị amalite ihe ọ bụla, ndị na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọkụ ... Gịnị ka m kwesịrị ime n'okwu a?
Zaghachi Richie Gonzales
Richie, gbaa mbọ hụ na ihichapụ oghere dị na mgbake. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, gbalịa hichapụ data, mana ọ na-ehichapụ data gị niile.
Hi Joe, otu ihe ahụ mere m ma ebe ọ bụ na m bụ ihe ọhụrụ na nke a anaghị m aghọta nke ọma ihe ị na-ekwu, agbalịrị m ịbanye na mgbake ma ọ naghị ekwe ka m mee nke ahụ = (
Zaghachi na worldiego
Dị ka Worldiego, abụ m neophyte na nke a, na Iweghachite anaghị ebu, naanị ndị LED na-enwu.
Nke a bụ vidiyo nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na mgbake
worldiego na Richie. Iji banye na mgbake, na sel agbanyụrụ, jide olu + ike ma hapụ ike mgbe njirimara gosipụtara, debe vol. Ga-enweta akwụkwọ nrụpụta ụlọ nrụpụta, ị leghaara ya anya wee nye ya ọfụma na igodo ike ma ị banye na mgbake ebe ahụ ị na-achọ nhichapụ. (Enwere vidiyo dị iche iche na youtube ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla).
Ọ bụrụ na ha enweghị ike ịbanye na mgbake ahụ, ihe nwere ike ịgahie n'oge mgbake na-enwu. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, chọọ google "Etu ị ga-esi wepu LG G2" enwekwara ọtụtụ ederede ebe ha kọwara ya. (Ọ bụ usoro dịtụ ogologo karị ịkọwa ya ebe a)
Ndewo Joe. M gbasoro ndụmọdụ gị, ihe niile dịkwa mma. Enwere m ọnụ m, gbanye mgbọrọgwụ, yana TWRP arụnyere ma rụọ ọrụ zuru oke. Na ekele niile maka okwu gị. Anọ m na-akwụ ụgwọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe, enwere m ike inyere gị aka. Ezi echiche, si Argentina… !!!
Obi dị m ụtọ na José. Ugbu a na ị nwere mgbake, nwalee liquidsmooth rom na android lollipop 5.0.1. O nwere ụfọdụ ihe iji melite mana arụmọrụ ahụ amaka!
Ok Joe.Ọ bụ n’abalị a (oge ntụrụndụ m), ana m ebudata ROM, wee nwaa ya na LG m, m ga-agwa gị ma emechaa. Ekele dịrị gị. Ekele…!
Daalụ nke ukwuu Joe, mgbe ozi m jisiri ike chọpụta ịbanye na mgbake ma mee cache wipie na dịka nhọrọ ikpeazụ m mere wipiw system na mgbe nke ahụ gasịrị, otu ihe ahụ bụ otu. Aghọtaghị m otú e si metụta ekwentị nke ukwuu na ọbụnadị pc nwere ike ibudata ọkwọ ụgbọala ngwaọrụ nke ekwentị m ma ọ mataghị ya dị ka ekwentị, yabụ enweghị m ike ịpụ ya n'ihi na pc kwụsịrị ịmara ya iji were ya gaa ebe nlekọta site na Telcel ma mezie ngwanrọ niile. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ilezi anya na-eduzi anyị ebe ọ bụ na onye ọ bụla bipụtara vidiyo a azaghị ọbụna n'ihi na m jụrụ ya maka ntụnye na akaụntụ Face ya. Ezigbo enyi Joe =)
Esteban Ferreyra dijo
Hi Jose, ọ masịrị m na ị gbalịsiri ike itinye mgbake na mkpanaka ahụ, eziokwu na-enye m isi ọwụwa ruo ọtụtụ ọnwa, ị nwere ike inye m aka, ekwentị m agbanyelarị ma enweghị m ike ịnweta akpaaka rec maka d806 na amaghi m otu m nwere ike isi wunye mgbake, o gha aru oru site na fayashiar faịlụ na edochi ha?
Zaghachi Esteban Ferreyra
Ndo maka mmejọ ndị dị na iji kọmputa dee Joe. Anọ m na-eme bọs mgbe m zara gị. Na Na Na…!
Ndewo nu, abum onye Emeng amaghi m ihe obula banyere nkiti ma obu ihe obula, ka anyi lee ma mmadu ga enyere m aka.Enwere m g2 mba uwa d802. enweghị m ike ịgbalite 4g. chọọ maka nkuzi m na-enweta menus zoro ezo ma ọ nweghị ihe mgbawa na-arụ ọrụ n'ihi na m gbalịrị ya na ekwentị ọzọ kpọọ ụlọ ọrụ ma ọ nweghị onye maara otu esi enyere m aka ,,, enyemaka
Kedu mba i si? Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye mgbochi na ekwentị, dịka ọmụmaatụ. N’ebe a na Ajentina, anaghị ahapụ ya rue ọnwa ole na ole gara aga. Na netwọk mkpanaka, ọ kwesịrị ịbụ nhọrọ nke netwọkụ kachasị amasị, ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị na mmelite maka sel. Ọ bụrụ na enweghị mmelite ọ pụtaghị na netwọk mkpanaka, ị ga-agbanye Flash ọzọ.
Ndewo, daalụ maka ịza m si mba Argentina, ụlọ ọrụ nkeonwe m anwalelarị imelite site na ngwa esupport lg. na ihe ọ bụla ,, eñenenu nọ n'ọrụ mgbe ọ metụrụ nhọrọ 4g apụtaghị mgbe ọ banyere na menu zoro ezo nhọrọ ahụ gosipụtara mana enweghị m ike ịnweta ịnyagharịa na 4g dị nro bụ kk4.4.2 na ụdị 80220 ga-abụ nke Eshia. Egwu m bụ imetụ ekwentị aka zitere m ozi, enwere m ya ruo ụbọchị iri na ise, ọ ga-abụ ihe gbasara ngwaike ma ọ gaghị adaba? Ihe dị ịtụnanya bụ na menu zoro ezo na-enye m band 15 bụ nke ahụ sitere na ebe a. nke ọzọ bụ 4 mana nke ahụ anaghị enye m, enwere m olileanya na ị ga-amakụ
G2 bụ 4G na ụdị ya niile. Movistar weputara nwelite nke weputara ya na Jenụwarị. Lelee ebe nrụọrụ weebụ ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ọ naghị ekwu ihe ọ bụla. O doro gị anya na ị nọ n'akụkụ ndị ekpuchiri ekpuchi?
Ọ bụrụ na enwere nkuzi nkuzi dị na peeji ahụ mana ọ dị mma maka ụdị d806 ahụ sitere na Latin America, agbasoro m ya na ihe ọ bụla, ọ bụrụ na mpaghara ahụ bụ Palermo Recoleta enwere ya. 'amaghim ihe m g'eme ma ụjọ na-atụ m iziga m ihere
Kevin Morante Nima dijo
hello xfavor xq na ekwentị m lg g2 mini ihe ntanetị na-apụta ma ọ na-enweghị ọrụ, gịnị ka m ga - eme
Zaghachi Kevin Morante Nima
iji nwetaghachi netwọk m si na Peru
Nwanna m mere nwụnye ma ha zuru oke mana emesiri m bidoghachi cel ma gaa na twrp wee bidogharịa ya ọ ka na-abanyekwa ebe ahụ ọzọ, sel m bụ Lg G2 D802, nke m na-eme iji nwetaghachi usoro nkịtị. Enwere m ekele maka nzaghachi gị
Santana heisenberg dijo
Mgbe m pịrị na bọtịnụ ra1n ya, ozi na-egosi n'okpuru ebe a na-ekwu… a anaghị akwado ekwentị a ugbu a
Zaghachi Santana Heisenberg
Etu esi egwu egwuregwu Tegra na ndị na-abụghị Tegra